Pro 24 | Mal1865 | STEP | Aza mialona ny olona ratsy fanahy, Na maniry ho namany;
1 Aza mialona ny olona ratsy fanahy, Na maniry ho namany; 2 Fa fandravana no saintsainin'ny fony, Ary fampahoriana notenenin'ny molony.
3 Fahendrena no anaovana trano; Ary fahalalinan-tsaina no mampaharitra azy; 4 Sady fahalalana no hamenoana ny efi-trano Amin'izay harena soa sy mahafinaritra rehetra.
5 Be hery ny lehilahy hendry, Eny, mitombo hery ny olona manam-pahalalana; 6 Fa ny fahaizana mandamina tsara no entonao miady, Ary raha maro ny mpanolo-tsaina, dia misy famonjena.
7 Avo tsy takatry ny adala ny fahendrena ▼
▼ Na: Ataon'ny adala ho haingohaingo foana ny fahendrena
, Tsy mba mahaloa-bava eo am-bavahady izy. 8 Izay misaintsaina hanao ratsy Dia atao hoe mpamoron-tsain-dratsy.
10 Raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao, Dia kely ny herinao. 11 Vonjeo izay entina hovonoina, Ary enga anie ka mba harovanao izay mangozohozo efa ho mby eo am-pamonoana! 12 Raha hoy ianao: Tsia, tsy mahalala izany ▼
▼ Na: io
izahay, Moa Izay mandanja ny fo tsy hihevitra izany va? Ary Izay mandinika ny fanahinao tsy hahalala izany va? Eny, hovaliany araka ny ataony avy ny olona rehetra.
13 Anaka, homàna tantely, fa tsara izany, Ary ny toho-tantely, fa ho mamy eo am-bavanao ▼
; 14 Ary aoka ho toy izany no hianaranao fahendrena ho an'ny fanahinao; Fa raha azonao izany, dia hisy hiafarana, Ka tsy ho foana ny fanantenanao.
15 Aza manotrika ao akaikin'ny tranon'ny marina ianao, ry ilay ratsy, Aza ravanao ny fonenany; 16 Fa potraka im-pito ny marina, nefa tafarina ihany; Ary ny ratsy fanahy kosa solafaka, raha azom-pahoriana ▼
▼ Na: ka idiran-doza
17 Aza faly, raha lavo ny fahavalonao, Ary aza ravoravo ny fonao, raha tafintohina izy; 18 Fandrao hitan'i Jehovah izany ka ataony ho ratsy, Ary ampialainy aminy ny fahatezerany.
19 Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy, Ary aza mialona ny ratsy fanahy; 20 Fa tsy hisy fanantenana ▼
▼ Heb. farany
ho an'ny ratsy; Eny, ho faty ny jiron'ny ratsy fanahy.
21 Anaka, matahora an'i Jehovah sy ny mpanjaka; Ary aza mikambana amin'izay miovaova ▼
▼ Na: hafa saina noho izany
; 22 Fa ho tampoka no hitrangan'izay hanjo ireny; Ary iza no mahalala izay loza hiseho amin'ny androny ▼
▼ Heb. taonany
24 Izay manao amin'ny meloka hoe: Marina ianao, Dia hozonin'ny olona sady ho halan'ny firenena; 25 Fa izay mitsara marina kosa no hahita soa sy hahazo fitahiana tsara. 26 Izay mahavoa tsara amin'ny famaliana dia manoroka ny molotra.
30 Nandalo ny sahan'ny kamo Sy ny tanim-boaloboky ny tsy ampy saina aho; 31 Ary, indro, feno sampivato izy Sady voasaron'ny amiana, Ary nirodana ny ampiantany vatony. 32 Dia nojereko ka noheveriko tsara, Eny, hitako ka nahazoako anatra. 33 Mbola hatory kely ihany, mbola ho renoka kely ihany. Mbola hanohon-tanana kely hatory; 34 Dia ho tonga toy ny mimaona hamely ny alahelonao, Ary ny fahantranao ho toy ny jiolahy.